Dalxus Media Group » Xiisada Somalia iyo Kenya – Wargeyska Star oo runta u sheegay dowlada KenyaDalxus Media Group
Xiisada Somalia iyo Kenya – Wargeyska Star oo runta u sheegay dowlada Kenya
Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa faalo ka qoray xiisadda diblumaasiyadeed ee dalalka Kenya iyo Soomaalya, waxaana Kenya uu sheegay inay sameysay qaladaad badan, isaga oo ugu dambeyn ugu baaqay inay Kenya dhageysato go’aanka Maxkamadda ICJ, waxaana qoraalka wargeyska u qornaa sidan:-
Kenya waxay u baahan tahay inay hoos u dhigto hadalada kulkul ee ay jeedineyso, taasi oo la xiriirta dhul badeedka ay dooneyso inay xoog kaga qaadato Soomaaliya.
Khamiistii lasoo dhaafay, Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa wariyaasha sheegtay “Maku wareejin doono qeyb kamid ah dhulka Kenya dowlad kale” ayay tiri xoghayaha arrimaha dibadda Kenya.
Waxay sidoo kale hadalkeeda ku dartay inay cunaqabateyn saari doonaan Soomaaliya, iyaga oo ka eegaya nooca jawaabta ay bixinayaan madaxda dowladda Soomaaliya ama haddii ay ku guul dareystaan inay raali gelin bixiyaan.
Sidoo kale wasiir Juma ayaa wariyaasha u sheegtay in wadamada caalamka qaarkood ay dagaal u aadaan waxyaabo yaryar, taasi oo ka dhigneyd Kenya inay la dagaalameyso Soomaaliya.
Kenya waxay leedahay masuuliyadda ay ku difaaceyso dhulkeeda iyo madax banaanideeda balse luqadda ay Kenya adeegsatay ayaa loo arkaa inay tahay cagajugleyn iyo mid qasab ah.
Inkastoo Kenya ay tani sheeganeyso Haddana maxkamadda Cadaalada adduunka ayaa waxaa horyaala kiista dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo mid kasta oo ka mid ah dhinacyadu ay fursad u heystaan inay soo gudbiyaan dacwadooda.
Inkasta oo Kenya ay ka soo horjeedo awoodda ICJ-da ee arrinta dacwadda badda waxaana ay doorbiday degenaansho la’aan diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed.
Sida ku heshiiyeen 2009-kii – Soomaaliya waxay ku guuleysatay wareeggii koowaad kiisna maxkamad horteeda.
Dhawaaqa duufaanta dagaalka ma xallin doono dhibaatada. Waa lagama maarmaan in Kenya ay ICJ dhageysato oo ay go’aamiso arrinta.